Haddii aad on this page, waa in ay u badan tahay waxay ka dhigan tahay in aad rabto in aad soo kabsado fariimaha aad tirtiray ka Sony Xperia Z. in dhab ahaan waxa aan la hadlo, laakiin qodobkan inta badan ka shaqeyn karin nooc kasta oo kale ee casriga ah android iyo sidoo . Thanks to Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) kabsaday fariimaha delete waa sida ugu fudud ee hal diraya. Iyadoo qasabno oo kaliya dhowr on your computer iyo aad Sony Xperia Z, waxaad soo kaban doontaa fariin aad tirtiray.
Software ayaa soo kabsanaya ka shaqeyn doonaan on a iyo sidoo kale ma rujin Sony Xperia Z. software ah rujin laftiisu u baahan yahay ugu yaraan 1GHz xawaaraha processor la 256 MB Raam oo 1 GB Hard meel drive. Dr.Fone for Android Inta badan la version kasta oo daaqadaha Microsoft nidaamka ka hawlgala shaqeeyaa, laga bilaabo XP daaqadaha ee daaqadaha la 8.1.
Dr.Fone for Android Waa in horumar joogto ah si loo soo celiyo waayo-aragnimo user ugu fiican oo u fududahay in ay macaamiisha iyo in la hubiyo in aan awood u yeelan doonaan inay ka soo kabsadaan fariimaha aad ka tir aad casriga android dambeeyay.
Sida aan sheegayay, kabsaday fariimaha lumay ka Sony Xperia Z waa mid fudud. Ka dib markii ay ku rakibidda Dr.Fone u android, xiriiriyaan casriga ah si ay u computer iyo abuurtaan barnaamijka. Waxaad haysan doontaa in aad sameysid xoogaa khalkhalgelinta fudud ee aad casriga ah, laakiin ha ka welwelin sida oo dhan u noqon doonaa sharax on Dr.Fone for Android.
Waxaad ka heli hoos ku Falanqeynta ah iyo tallaabo-tallaabo tilmaamaha sida inuu ka soo kabsado fariimaha aad tirtiray ka Sony Xperia Z. doonaa
Halkan ayaa ah meesha oo Sixira dhacaya, nasato oo sug Dr.Fone u android inuu shuqulkiisii ​​qabsado.
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray fariimaha ku Sony Xperia Z
Haddii aad rabto in aad soo kabsado dhammaan fariimaha aad, hubi in sanduuqa farriintu ku sax (berdaha. 1) guji soo kabsado (berdaha ahaa. 2). Haddii aad rabto in aad ku eegaan fariimaha aad dooro fariin gaar ah in aad rabto in aad soo kabsado, fadlan sax sanduuqa ku xiga si ay fariin aad rabto in aad soo kabsado (berdaha ahaa. 3) iyo guji soo kabsado (2 berde.)
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka Sony Xperia Z